विकू जहाँ पुगेको छ त्यहाँ राम्रो सेवा दिएको छ र गरिबीबाट माथि ल्याएको छ – अध्यक्ष सापकोटा
By vijayafm on	 August 25, 2018 विजय परिवार, विविध खबर, स्थानीय
विकू वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड
विकू जुन सोचका साथ स्थापना भएको थियोे के त्यो सपना पूरा हँुदैछ ?
सपनाहरु परिवर्तन हुँदै जान्छन् । एउटा मूल कुरा के हो भने अहिलेको समयमा सपनाहरु बुनिन्छ । त्यसबेलाको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अवस्था के छन् भनी सपनाहरु बन्दै जान्छन् र ती सपनाहरु परिमार्जित हँुदै जान्छन् । एउटा सपना पूरा भएपछि अर्को सपना देख्न थालिन्छ । मूलतः तत्कालीन हाम्रा संस्थापकहरुले देखेको सपना भनेको कसरी यो समाजलाई बेरोजगारबाट मुक्त गर्न सकिन्छ ? कसरी फजुल खर्च कम गर्न सकिन्छ ? कसरी पैसाहरुलाई एकीकृत गरेर आर्थिक उन्नतिमा लगाउन सकिन्छ भन्ने एउटा सपना थियो तर त्यो सपना यति ठूलो रुपमा आउँछ जस्तो मलाई लागेको थिएन । तर समयले परिवर्तन गर्दैै जाँदा सदस्यहरुका आवश्यकता पूरा गर्दै जाँदा मुख्यतया गुणस्तरीय सेवा र सदस्यको सन्तुष्टिलाई मापन गर्नुपर्ने हुन्छ । सपनाहरु परिवर्तन हँुदैछन् र त्यसबेला देखेको सपनाभन्दा अहिले ठूलो भइसकेको छ ।
विकूले गरेको प्रगतिचाहिँ के हो ?
बिकुले गरेको प्रगति समुदायको पहिलो रोजाइमा आउनु हो । नवलपुरको वित्तीय क्षेत्रमा हेर्नु हुन्छ भने सबैभन्दा ठूलो ‘क’ वर्गका केही बैंक छोडेर हेर्दा वित्तीय समाधानका लागि विकू नै एक नम्बर हो । त्यो कसरी थाहा हुन्छ भने सदस्यको सन्तुष्टि, वित्तीय आकार, सदस्यको संख्या र कर्मचारीको कामप्रतिको लगावले देखाएको छ । अहिलेसम्म समितिले देखाएको निरन्तरता सम्पूर्ण कुरालाई हेर्ने हो भने यसको प्रभावकारिता अतुलनीय छ ।
गरिवी निवारणमा विकूको भूमिका कस्तो छ ?
हाम्रो प्रारम्भिक अनुसन्धानले के देखाउँछ भने हामीले १ देखि २००० नम्बरका सदस्यहरु हेर्ने हो भने हाम्रा सदस्य बहुआयामिक हुनुहुन्छ । गरिबीको मापन हेर्ने हो भने एकदमै कम हुनुहुन्छ । तर केही क्षेत्रहरु यस्ता छन् जहाँ गरिबीको रेखामुनि हुनुहुन्छ हामी त्यहाँ पुग्ने कासिस गरिराखेका छौँ । सबैभन्दा ठूलो सहकारी क्षेत्रको कमजोरी चाहिँ यो गरिबीको दुश्चक्र जहाँ छ त्यहाँसम्म पुग्न नसकेको जस्तो मलाई लाग्छ तर विकूले जहाँ पुगेको छ त्यहाँ राम्रो सेवा दिएको छ र गरिबीबाट माथि ल्याएको छ ।
विकूले अघि सारेका ३ वटा साक्षरता अभियान के के हुन् र यिनको आवश्यकता किन देख्नुभयो ?
यी तीनवटा कुरा के हुन् भने एउटा वित्तीय साक्षरता, अर्को प्रविधि साक्षरता र तेस्रो स्वास्थ्य साक्षरताको कुरा गरेका छौँ ।
बित्तीय साक्षरता किन भन्दा दिनको दुई गुणा र रातको चार गुणा जसले कमाउँछ त्यो मान्छे असल हो र राम्रो हो भनी समाज पछि दौडिरहेको छ तर त्यसो होइन । वित्त चाहिने कुरा हो तर उसले कसरी आर्जन ग¥यो ? उसको खर्च कहाँ छ ? आम्दानी र खर्चका बीचको सन्तुलन छ कि छैन ? उसले बचाउन सक्छ कि सक्दैन ? भनेर देखाउन सक्दैनौँ तब यो समाज थप भ्रष्टाचारमा जान्छ । त्यसैले हामी असल जीवन कसरी बिताउन सक्छौँ ? यो प्रभावकारी र गुणस्तरीय जीवन कसरी बिताउन सक्छौ ? भन्ने हो ।
दोस्रो प्रविधि साक्षरताको कुरा गर्दा हामीले छिटोछरितो सेवा कसरी सदस्यका घरमा पु¥याउन सक्छौँ ? जसले गर्दा दुइटा कुरा हुन्छन् । अहिलेको जेनेरेसनका बुवाआमाहरुका बच्चाबच्ची विदेश हुनुहुन्छ । हामीले प्रविधिलाई दुई तरिकाले जोडेका छांै । एउटा वित्तीय प्रविधिसँग अर्को उहाँका छोराछोरीसँग जोड्ने काम गरिरहेका छौं ।
तेस्रो रÞयो स्वास्थ्यको कुरा । स्वास्थ्यमा यति धेरै खर्च भएको छ, त्यसले गरिबीको चपेटामा पार्छ । त्यसैले यी तीनवटा कुरालाई हामीले यो वर्ष ‘हाम्रो लक्ष्य खुसी र स्वस्थ सदस्य’ भन्ने अभियान अघि बढाएका छौँ ।
अबको योजनाचाहिँ हामीले तीनवटा कुरा ग¥यौँ यसवर्षका लागि तर अबको पाँच वर्षमा हामी के सोचेका छौं भने समुदायको पहिलो रोजाइ उत्कृष्ट वित्तीय संस्था, त्यसभित्र दुईवटा कुराहरु छन् । समुदायको पहिलो रोजाइ हुनलाई हाम्रा सेवाहरु तदनुसारका हुनुपर्छ । उत्कृष्ट वित्तीय संस्था हुन आन्तरिक रुपमा बलियो हुनुप¥यो । त्यसलाई हामीले कसरी जोडेका छौं भने पहिला हामीले जन्मदेखि मृत्यृसम्म भन्थ्याँै । अब त्यतिले मात्रै पुग्दो रहेनछ है । जन्मदाभन्दा पहिला सेवा दिनुप¥यो र मुत्युभन्दा पछि पनि सेवा दिनुप¥यो । हरेक उमेर समूहमा कुन उमेरमा के सेवा चाहिने हो वित्तीय र गैरवित्तीय सेवा त्यो छुट्याउँछौ र हरेक उमेर समूहमा हामी सेवा दिन्छौँ ।